Raad Raac News Online – Midowga Europe oo sagaal Milyan ugu deeqay Waxbarashada Puntland.
Midowga Europe oo sagaal Milyan ugu deeqay Waxbarashada Puntland.
Moos Bukeeni December 12, 2012 0
Midowga yurub ayaa Puntland ugu deeqay ilaa sagaal milyan oo lacagta doolarka mareykan ah taasi oo qeyb ka ah dhaqaalaha midowg yurub uu ku bixinaya waxbarashada guud ahaan dalka Soomaalia.
Kulankan lagu daahfurayay bixinta deeqaha lacageed ee midowga yurub uu siinayo dowlada dhexe ee dalka soomalia iyo maamulada dalka ka jira ayaa waxaa uu maanta ka dhacay xarunta wasaarada waxbarashada Puntland.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Gen-Cabdi samad Cali Shire xubno ka tirsan labada golle ee dowlada quburo matlayay Midowga Yurub aya goob ka ahaa madal lagu soo bandhigayay bixinta deeqda lacagta ee dhanka Puntland uu midowga yurub siiyay tasi oo lagu sheegay in ay dhan tahay todobo milyan iyo badh oo u dhigan sagaal miylan oo doolarka mareykanka.
Meelaha uu sida gaarka ah uga fulayo howshan masharuuca kobcinta waxbarasho ee Puntland ayaa waxaa la sheegay in diirada lagu sari doono ilaa laba iyo toban degmo oo laga soo kale xulay sideeda gobalka ee Puntland.
Sidoo kale howshan ayaa waxay qeyb ka noqon doontaa kobcinta iyo kor u qaadida tayada waxbarshada dugsiyada sare,dhexe,kobcinta tayada waxbarashada dugsiyada farsamada gacanta iyo tababarka macalimiinta,
Markii uu shirkan soo dhammaaday ka dib ayaa war saxafadeed ay qabteen xubnaha dowlada iyo quburada midowga yurub waxay faah faahin ka bixiyeen meelaha uu diirada saari doono mashruucan sadaxda sano ee soo socota sida uu ka shanqariyay wasiirka waxbarashada Puntland Cabdi Faarax Siciid Juxa.
Wasiirka qorsheynta iyo xeriirka calamiga Puntland daa’uud maxamed Cumar ayaa dhankiisa sheegay,in ay uga mahad celinayaan madaxda midowga yurub deeqaha dhaqaale ay ku bixinayaan deeqaha waxbarashada Puntland.
Madaxa Arimaha bulshada midowga yurub esa bell ayaa dhankeeda iftiimisay in arintan ay tahay mid qeyb ka ah taageero uu midowga yurub siinayo tayada iyo kor u qaadida waxbarashada guud ahaan dalka soomalia.
Si kastaba ha’ahaatee arintan ku adan bixinta deeqahan lacageed ee midowga yrurub uu siinayo dowlda dhexe ee dalka soomaalia iyo maamulada dalka soomalia ayaa waxay qeyb qweyn ka tahay hormarinta dhinaca masharaaciiaha iyo kobcintra waxbarashad ee ururka midowga yruub ka wado soomaalai.